१७ वर्षीया युवती‘आइफोन ८’का लागि यस्तो सम्म गर्न तयार भइन् - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
१७ वर्षीया युवती‘आइफोन ८’का लागि यस्तो सम्म गर्न तयार भइन्
by ratoपिरो · November 3, 2017
एजेन्सी । मानिसहरु आफूले चाहेको सामान पाउन जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने उदाहरण हुन् चीनकी १७ वर्षीया युवती सिआओ । उनले आइफोन ८ पाउने लोभमा सञ्चार माध्यममा आफ्नो कुमारित्व बेच्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उनको यस निर्णयले मानिसहरु अचम्ममा परेका थिए ।
सिआओले गरेको त्यस्तो पोस्ट देखेपछि नाना नामक चिनियाँ ब्लगरले यति सानो उमेरमै यस्तो शर्मनाक काम गर्न लागेकोमा दुःख व्यक्त गरिन् । त्यसकारण सिआओलाई कहिल्यै नबिर्सने पाठ सिकाउन उनले एउटा प्रयाङ्कको योजना बनाइन् ।
पहिले नानाले एउटा धनाढ्य व्यवसायीको सेक्रेटरी भएको नाटक गर्दै सिआओलाई सम्पर्क गरिन् । त्यसपछि नानाले उनीसँग भेटेर आफ्नो मालिकले आइफोन ८ को बदलामा उनीसँग एक रात होटलमै बिताउने प्रस्ताव राखेको बताइन् । नभन्दै सिआओले पनि आइफोन ८ पाउन जस्तोजुकै काम गर्न पनि तायर भएको भन्दै सहज स्वीकार गरिन् । आफ्नी स्कुलकी साथीले पनि त्यसरी नै कुमारीत्व बेचेर आइफोन ८ खरिद गरेको बताउँदै सिआओले नानाको प्रस्ताव केही नसोची हुन्छ भनिन् ।
त्यसपछि नानाले आफ्ना अफिसका एक क्रु मेम्बरलाई उनको मालिक बनाएर सिआओसँग कोठामा पठाइन् । मालिक बनेका ती क्रु मेम्बरले कोठामा छिर्नासाथै सिआओलाई आइफोन दिए । सिआओ एकछिन अचम्ममा परिन् र खुसी भइन् तर लगत्तै उनीहरुको कोठामा अन्य दुई बिना सर्टका मनिसहरु आए । त्यसपछि उनीहरुले सिआओलाई खाटमा राखेर भिडियो बनाउन सुरु गरे । यसपछि प्रयाङ्को सुरुआतमै सिआओको होस् उड्यो । उनी डराएर मद्दत माग्न थालिन् । उनले आइफोन फिर्ता गर्छु भन्दै रोएर बिन्ती गर्न थालेपछि ब्लगर नाना त्यहाँ पुगिन् । रोइरहेकी सिआओलाई उनले आफ्नो प्रयाङ्कबारे सबै कुरा बताइन् र उनलाई पाठ सिकाउन त्यस्तो गरेको भनिन् । नानाले उनलाई त्यसरी पैसाका लागि सेक्स गर्नु गलत भएको भन्दै सम्झाइन् । सिआओले पनि अबदेखि त्यस्तो हर्कत कहिल्यै नगर्ने वचन दिइन् ।
Next story विगत ६ वर्षदेखि आफ्नै पिसाब पिउँदै
Previous story इन्टरनेटमा भाइरल बन्दैछ काँडेे ओठ हेरौँ केही रोचक तस्वीरहरु।
पत्याउनु हुन्छ ? शरीरमा हड्डी नै नभएको मान्छे पनि हुँदारैछन् ! नपत्याए हेर्नुस् भिडियो अनि आफै थाहां पाउनु हुन्छ ।
बेश्यासँग बिताएको एक साँझ by प्रकाश आङदेम्बे
यो कस्तो परम्परा, जहाँ भाई र बहिनी बिच नै बिहे गरिन्छ !!!